Sidee Waxaan Isticmaal Gifts Our waayo, Ilaah? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sidee Waxaan Isticmaal Gifts Our waayo, Ilaah?
Tani waa fariin kooban oo ka soo Shirka College Advance in Raleigh, NC. Waxaad ka akhrisan kartaa qoraal gacmeedka hoose:
Waxaan doonayaa in aan kula hadlo oo aad u kooban oo ku saabsan isticmaalaya hadiyado our waayo, ammaanta Ciise.
kids Weligaa ma maqashay weydii su'aalo? Waxay leeyihiin aqoon korodhsiga la yaab leh in ay u muuqataa in ay dhammaad ma leh. su'aasha Taasi sixir “sababta” tegi kartaa on saacado iyo saacado. Waxaan leeyahay saaxiibo ay kids yihiin in marxaladan hadda. Well waxa ay u muuqataa in ay jiraan ilmo yar oo naftayda in uu jecel yahay in aad weydiiso sababta, laakiin ma ahan oo ku saabsan su'aalaha la taaban karin, waxay ku saabsan tahay wax maalin kasta.
Waxaan si fudud ma dhiiriyo. Waxaa jira dadka qaar, kuwaas oo si dabiici ah kexeeyey, iyo xaqiiqda ah in wax u baahan yahay in la sameeyo waa dhiirogelin filan yahay. Xaaskeyga waa mid ka mid ah dadka; Anigu ma ihi.
In si hagaagsan ha iigu si aad u hesho wax soo gabagabeeyay, Waxaan u baahanahay dareenka ah in aan wax grand samaynaya. "Laakiin haddii aan qashinka this qaadato, nin qashinka badbaadiyey doonaa?"Waxaan ahay nin sawir weyn, iyo inaan dhif keentay in ay faahfaahin ama hawlaha daalin. Nasiib darro, tafaasiisha iyo hawlaha daalin yihiin inta badan ee nolosha dhabta ah. Tani waa sababta aan ku dhibtooday aad u badan dugsiga sare, xitaa ka dib markii aan noqday Christian a. fasalada My xisaabta muuqatay aan waxtar lahayn iyo homework dareemay sida qashinka ah, wakhtigaygu.
Waan ogahay anigu ma ihi mid ka mid ah oo kaliya in uu ogaado awood u adag tahay in lagu dhiiriyo mararka qaarkood. Waxaan dhamaanteen leenahay todobaad kuwa halkaas oo uu dareensan yahay sida wareeg aan dhamaanayn oo ah blah. Waxaan mararka qaarkood doonayaan oo kaliya in ay soo saaraan wax weyn, laakiin wax walba waa weyn, sababtoo ah wax walba waa qayb ka mid ah sheekada weyn. Sheekada ugu weyn in Ilaah mid yahay runlayaasha isaga iyo ammaanta.
Tani waa xitaa dhabta ah ee hadiyado our. Waxaan la jirrabo inay ka fekeraan hadiyado sida qeyb ka mid ah sheekada ku saabsan nafteena. Sida dhammaan nolosha waa wax yar arjiga shaqada keenta in dadka kale loo soo jiitay nala. Marka halkii dhan nolosha waa Suurad sheekada weyn ammaanta Ilaah.
hadiyadaha aad halkaas u joogaan inay caawiyaan sheegi sheekada weyn.
Waa dhan ah oo ku saabsan, ammaanta Ilaah
Waxaan xusuustaa markii aan bilaabay inaan ka fekero wax walba sidan. Waxaan bilaabay heeso raab ah markii aan dhab dhalinyaro ah, oo waxaan rapped ku saabsan dhammaan xaggaygaan u ahaa. Markaas waxaan ogaaday in wax walba waxaa jiray waayo, ammaanta Ilaah, ma ammaanta Trip. Halkan ka mid ah meelihii runtii in kor ii waayey.
15 Isagu waa suuraddii Ilaaha aan la arki karin, oo ah curadka uunka oo dhan. 16 Waayo, wax kastaaba isagay la abuuray, samada iyo dhulka, la arki karo iyo la arki karin, hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro-oo dhan wax la abuuray isaga oo isaga u.
Waan jeclahay sida cad Paul waa in Ciise abuuray WAX KASTA. Isagu ma uusan wax ka soo tago. Waxyaabaha on dalka iyo in samooyinka, waxyaabaha aad ka arki kartaa iyo waxyaabo badan oo aadan arki karin, boqorro iyo taliyayaal noocyo kala duwan ah, xitaa ciidamada ruuxi ah iyo maamulka. Later kitaabkii (iyo meelo kale) Paul waxaa loola jeedaa jinniyadooda sharka leh sida taliyayaasha ama maamulka. Oo uu ku yidhi iyagii la abuuray by Ilaah iyo Ilaah. Waa hagaag, haddii xataa jinniyadu la abuuray by Ciise, waayo, Ciise, markaas hubaal waa hadiyado.
Mid ka mid ah waxyaalaha kala duwan oo ku saabsan in amar Ilaah waa in marna waxaa loo dhiibay si ay u. Kings soo fuulo soo socda sida dhaxal. Madaxweynaha la doorto. Gaysteen waxaa loo tababaray oo la siiyey calaamad a. Ilaah keliya waa kan ay amar uu mar walba jiraye.
Ma uusan qaadan on doorka qof kale. Ma uusan tababar waxaa loogu talagalay. Ma uusan u leeyihiin in ay xaq u yeelato. Waxa uu marna loo doortay, oo isna doonaa weligiis la xil. Waxyaabaha la abuuray aawadood isagoo hoos amarkiisii ​​iyo loo isticmaalo ujeeddooyin uu wanaagsan.
Sidaa darteed, Eebana ma doonayaan in ay ammaan oo kaliya ka qayb ka mid ah noloshaada aad u hesho, laakiin ka oo dhan waxaa ka mid ah.
hadiyado Your la abuuray by Ilaah oo leh ujeeddo gaar ah, inaad u sheegto sheekada Ammaantiisu.
Markii aan alaabta ka IKEA iibsadaan, Waxaan ognahay laba wax: 1, this marka laga reebo malaha dhici doona sanadka soo socda. Oo 2, waxaa ay noqon doontaa badan oo gogo 'iyo tilmaamaha gudaha.
Aan doonaynin waxa ay noqon carrab la ', haddii anna waxaan soo qaaday qaar ka mid ah kuwa boolal la damacsanaa guugta oo iyaga loo isticmaalo wax kale? Waxay la siiyey ii purpose- ka looxaan alwaax u boolal iyo tools- oo ay qayb ka mid ah dhismaha shelf in ay yihiin. The hadiyado in qof waliba leeyahay waa qalab aad qalabeed sheeko. Gaar siiyey inaad u sheegto sheekada ammaanta Ilaah. Waxay ka jiraan in la keeno Ilaah ammaantiisa.
Qof la odhan kara, waxa igu saabsan in kastoo? Maxaa ku saabsan fulinta shakhsi? Waxaan doonayaa in aan noqdo weyn. Well doorka ugu weyn ee aad abid ka ciyaari kara, waa door sawirka weyn. Oo Ilaah waxa uu ugu yeedhay oo dhan oo naga mid ah in ay qayb ka noqon.
Laakiin sidee aan helno meel aan hadiyado our isticmaali waayo, ammaanta Ilaah? Waxaan ha oo dhan taas loo sameeyo si fiican u.
Fall jacayl ammaanta Ilaah la
Dhibaatada waxa ay tahay waxaan inta badan ammaanta Ilaah ma arkaan sida wax qiimo dagaalamaya oo nool, waayo,. Waxaa kale sababtoo ah waxaan Ilaah ma arkaan sida quruxda leh oo ku filan. Marka aad bilowdo fahamka sida grand Ilaah waa, aad bilowdo doonaa fahamka sababta Caalamka kooban isaga iyo isaga oo keliya ku xeeran.
Marka aad akhriyi Isaiah 40 waxaad aragtay in uu isku dayay in uu ammaantiisa qaataan naftaada ama qof kale ah oo aan waxba ka yar tahay dhac. Waxaa iska leh, waana uu u qalmaa!
Waxaan idinku dhiiri lahaa in ay akhriyaan kuwa qeybo ka mid ah Kitaabka oo ay dadku ku faana Ilaah. Ishacyaah 40. Salaadda Hannah ee 2 Samuel 2. Muuse song ka dib markii ay soo maraan Badda Cas. Sabuurradii 135.
Ilaa aad kor ku duudduubtay oo ammaanta Ilaah, ma aad daryeesho doonaa in ay isticmaalaan hadiyado aad isaga, waayo,.
Mararka qaar waa adag tahay in aad ka fikirto sidii aad u isticmaali hadiyadaha aad heshaan, waayo, ammaanta Ilaah, sababtoo ah ma ahan mar walba si cad. Waa wax aad u cad marka aad u muuqdaan in ay leeyihiin hadiyado wax hadalka cad ama wax u muuqataa ruuxiga ah. Ama xitaa in farshaxanka. Laakiin ma ahan sida cad marka hadiyado aad u muuqdaan inay yihiin maamulka ama hoteelada.
Paul na siinayaa sharrax qaar meelo kale oo Kolosay. Dhegayso waxa uu sheegay in Kolosay 3.
23 Wax kasta oo aad sameyn, shaqeeyaan idinkoo, sida waayo, Rabbiga ah oo aanan nin, 24 idinkoo garanaya inaad xagga Rabbiga aad dhaxalka heli doontaa abaal marin aad. Waxaad u adeega Rabbiga Masiixa.
Paul ma ka yar yahay dareen ah in hadiyado maamulka, ama hadiyado si ay u caawiyaan carruurta, ama hadiyado kaliya in ay sameeyaan shaqo walise si fiican ma loo isticmaali karaa waayo, ammaanta Ciise. Waxaa jira saddex su'aalo fudud waxaan ka codsan kartaa nafteena ku salaysan waxa uu sheegay in
Sidee waa in aad ka shaqayso? Waxaan waa "idinkoo shaqeeyaan"
Waxaan la jirrabo in wahsan shaqeeyaan. Gaar ahaan wax meesha xiriir si aad ammaanta Ilaah ma aha sida cad. Laakiin Bawlos ayaa sheegay in shaqada idinkoo ama la jirtay oo dhan qalbigiinna. Waa in aan la daacadda iyo dadaalkaas shaqeeyaan
2. Yaan aad u shaqayso? Waxaad ka shaqayn waayo, Ciise.
Mararka qaar waxaan la jirrabo si adag u shaqeeyaan, laakiin si ay u sameeyaan, waayo, dadka khalad. Si aad ka farxisid our Tababaraha ama waalidiinta ama dadka kula shaqeeya our. Inkasta oo aynaan inta badan mas'uuliyiinta noo noqo, waxa aan ugu dambeyntii ka shaqeeya in Ilaah ka farxin aan iyaga. Waxaan ma ka heli karo jacaylkiisa, laakiin waxaan isaga ku kalsoon karo oo keena raaxaysi by isaga lagu maamuusayo.
3. Waxa aad heli doontaa? Your dhaxalka sida kuu abaalgudi
Mararka qaar waxaan la jirrabo in xitaa adag u shaqeeyaan, waayo, Ciise, laakiin in ay ka fekeraan hoogay waa, Anigu waan shaqayn ah oo aan waxba. Taasi waa khalad! Waxaad shaqeeyaan si ay Ilaah ka farxin, aad ka jawaabi Xaggiisa. Oo waxaannu waxaa lagu Abaal marin ah ee aannu ku hawshootay, by nimcada Ilaah ee. Fadligiisa noo qaadeysaa inay idinkoo shaqeeyaan oo isagu waa naga abaal shuqulkii uu noo sameeyo in. jeegaaga A kuma filna in la dhiso noloshaada agagaarka, laakiin abaal weligeed ah waa.
Dhagartii waayo, ammaanta Ilaah
Weligaa inta aad sida aan ogaaday qorshaha waayo, waxyaalaha aan si dhab ah duudduubtay in?
Tan waxaan kusoo arkay in aan nolosha u gaar ah iyo la xukumay waxaa by. Halkan tusaale. Waxaan ku dhici noqon lover ah kabuhu. Markaasaa jeer qaar baan uga aad u duudduubay kartaa waa in. Sidaas dhawr todobaad ka hor waxaan lahaa fursad si ay u tagaan dukaan sneaker weyn intii aannu magaalo kale oo dhan waxaan ahaa faraxsanahay oo ku saabsan. Oo markaas u muuqatay waxaa la ma in ay ka shaqeeyaan.
Waxaan freaked baxay oo intuu tegayay iyada oo dhibaato badan si ay u dhici. Waxaan yeelanayay wicitaanada iyo fikirka ku saabsan beddelo duulimaad, iwm. Laakiin markaas waxaan joojiyey oo aan weydiiyay, "Waa maxay sababta?"Maxaa yeelay, waxaan kor loo duudduubay waa in.
Waxaan u muuqdaan in ay nidaamka waayo, wax alla wixii aannu u jecel yihiin. Waxaan ka heli siyaabood oo wax wax u dhacaan. Oo markay aad u jecel ammaanta Ilaah aad ka heli siyaabaha loo isticmaali nook kasta iyo cranny ee noloshaada, waxaa ka. Waxa uu u qalantaa.
talo My waa this: Chase Ciise oo dhici jacayl isaga la ilaa aad ka aragto wax walba sidii fursad ay dadka isaga ku saabsan u sheego.
Emeteria • December 18, 2014 at 2:33 pm • Reply
Aamiin! Waxaan loo baahan yahay in la maqlo maanta this. Mahadsanid!
Keshia • December 18, 2014 at 2:34 pm • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi
Gordie Tamayo • December 18, 2014 at 2:54 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay la wadaago. Tani waxaa loo baahan yahay wax badan oo loo qaaday wadnaha. G
Cameron • December 18, 2014 at 8:36 pm • Reply
Runtii,, mudnaanta nolosheyda aan lagu rido aragti ka this reading…… Mararka qaarkood waxaan is yar buuxiya shaqada waxaan u bixiyey inaan sameeyo…..aad u badan si ay hadiyadaha aad Ilaah i barakeeyey oo aan wakhtiga intiisa badan u muuqdaan in ay dilayo…..Sidaasaan ku dilayo macnaha aad shaqada Ilaah i soo waco si ay u sameeyaan iyo Leexin uu Love iyo naf Ujeedada aan adeeg halmaamay in ay tahay wuxuu ka Nasahanyahay oo ka nasahan oo keliya sababta aan sameeyo iyo wax aan ku jirnaa……#blesstobecallforpurpose #
keeno Kaputula • December 20, 2014 at 4:37 waxaan ahay • Reply
bro.am Deep dhiirigelinayaa
Michael • December 22, 2014 at 3:11 waxaan ahay • Reply
'Chase Ciise oo waxay ku le'an jacayl isaga la ilaa aad ka aragto wax walba sidii fursad ay ku sheegto dadka isaga ku saabsan.’
Ma heli karaa hab fiican oo ah sida in loo sheegay in laga yaabo. Had iyo jeer u Waxyoon.
Chris • January 8, 2015 at 12:23 pm • Reply
Bro article Great. Waxaa i dhiirri-galiyay iyo I xusuusiyay qaar ka mid ah mabaadiida muhiim ah. Taas macneheedu sababta ay muhiim u tahay sii reading Qorniinka aad u, Kitaabka Quduuska ah had iyo jeer cusboonaysiiyay maskaxdeena. Oo sida Hadalku tagaa, “haddii aadan isticmaalin, aad lumiso”. Waxa muhiim ah in la dhaqan geliyaa waxa aan wax ka bartaan Qorniinka iyo waxa ay dhaqan arimahan ka dhigi. jeediya, niyad-jabka, halgan waxay keeni kartaa in caadooyinka saboolka ah marka aan si fiican loo maareeyay, taasoo keentay in Jahwareer more. Jidka Eebe had iyo jeer waa habka ugu fiican ee, Masiixa waa jidka nabadda iyo farxadda iyo Ilaah ammaanaya.
Sammy Msiska • January 21, 2015 at 11:08 pm • Reply
Waxaad tahay tusaale wanaagsan oo ah dadka isticmaala ay hibo kasta oo Ilaah u ammaanaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan arko kaliya ma aad eray keliya, laakiin sidoo kale waxa ay qabanayaan ahay. Waxaad igu dhiiri safarka…sii Glorifyin Ilaah
TamekaBowen • March 2, 2015 at 5:21 pm • Reply
Sidaas awood. Wax walba waxaa si dhab ah u abuuray, waayo, Ciise iyo Ciise. Waa maxay fursad wanaagsan in uplift uu injiilka taas oo naftayadii Ujeedada ee jidhka Masiixa!! Halleeluuya waxa fariin awood leh!! :-)
Leo • June 24, 2015 at 6:07 pm • Reply
Waxaan u jeclaa sababtoo ah maalin walba i samayn yar xaq iyo wax badan oo qaldan, Waxaan neceb this badan laakiinse ereyadaydu aad i siisay rajo isbedel. Waa in aynaan diiradda saaraan waxa aanu si fiican oo caawin doono na loo hagaajiyo
Leo • December 11, 2015 at 2:01 pm • Reply
aan la rumaysan karin, Ilaah, waayo, wacdintii this ammaana, Waxa uu dhawaan sugayay turjumi karaa videos aad galay Isbaanish, waxaan noqon lahaa mid wax tar leh!